Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Wednesday, November 16, 2011 Wednesday, November 16, 2011 Labels: သုတအဖြာဖြာ
ဒီရက်ပိုင်း စာရေးဖို့ အချိန်နည်းနေတာမို့ နှစ်သက်သဘောကျမိလို့ သိမ်းထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီးအနုပညာ လက်ရာ ပုံလေးတွေချည်းကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ လူတွေမှာ စိတ်ကူး အိုင်ဒီယာ သာ ကောင်းရင် ရွှေဖရုံသီးကနေလည်း အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ မျက်နှာတွေကို ပုံဖော်နိုင်ပါသေးတယ်.. အနောက်နိုင်ငံများမှာတော့ Halloween လို့ခေါ်တဲ့ ပွဲတွေမှာ ရွှေဖရုံသီးကို ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးအမျိုး ထွင်းထုပြီး အသီးရဲ့အတွင်းထဲမှာ မီးထွန်းချိတ်ဆွဲတတ်ကြပါတယ်။ Halloween ပွဲတော်အတွက်တော့ ရွှေဖရုံသီးဟာ မပါမဖြစ် အထိမ်းအမှတ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ Halloween ပွဲတော်အတွက် အမျိုးမျိုးသော ဖရုံသီး ပုံသဏ္ဍာန်များကို ထွင်းထုရင်း ပိုမိုအသေးစိတ်ပြီး လှပသေသပ်တဲ့ ဖရုံသီးအနုပညာ တိုးတက်ဖြစ်ထွန်း လာဟန် ရှိပါတယ်။
ရွှေဖရုံသီးပေါ်မှာထွင်းထုထားတဲ့ ထူးထူးခြားခြား ရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရတာ အဓိပ္ပါယ်တွေ ရှိနေတယ်လို့ ကျွန်မက ယူဆပါတယ်။ အနုပညာမြောက်အောင် ထွင်းထုထားတဲ့ ရွှေဖရုံသီးများကို ကျွန်မ နားလည်သလို အောက်က ပုံတွေမှာ ဘာသာပြန်ထားလိုက်ပါတယ်..
Hello.. အားလုံးမင်္ဂလာပါ.. ကျွန်မနာမည် မချောပါရှင့်.. ကျွန်မရဲ့ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ကို အလည်လာတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်... အောက်မှာတော့ ကျွန်မရဲ့ မိတ်ဆွေ ဖရံသီးလေးများကို ဆက်လက် ကြည့်ရှုအားပေးပါလို့နော်.. :P
အားလုံးအတွက် ပျော်စရာနေ့လေး ဖြစ်ပါစေနော်..
ကျွန်တော်ကတော့ အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်ဘလော့ကို စောင့်တဲ့တံခါးမှူးပါ...
ကျွန်တော်ဆရာဝန်တစ်ယောက်ပါ.. အဲလေ. လူရိုင်းခေါင်းဆောင်ပါ။
ကျွန်တော့်ကို သေချာကြည့်ပါ.. မျက်မှောင်ကုတ်ပြီး မကြည့်ပါနဲ့။
ဘလော်ဂါတွေက ကျွန်မကို လှတယ်ပြောကြတယ်ရှင့်...
ဘယ်သူကများ ဒီရုပ်ကို လှတယ်လို့ ပြောလိုက်ပါလိမ့်ကွာ..း(
ဘယ်သူလဲကွ. ရွှေဖရုံသီးနဲ့ ပေါက်တာ.. လက်ဆော့လှချည်လား..
ကျုပ်တို့ကို ဒီအချုပ်အနှောင်ကနေ ဘယ်တော့လွတ်ပေးမှာလဲ..
ဘာ.. မလွတ်ပေးသေးဘူး ဟုတ်လား။
မျက်မှန်ကြီးနဲ့ လူကြီးလူကောင်းဆန်ပါကွာ မဟုတ်တာတွေ မလုပ်ပါနဲ့။
မင်းဘဲ ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲဘဲထင်ပါတယ်..
မတရား စားထားတာတွေ သိပ်များသွားတော့စားပိုးနင့်တတ်တယ်..
ငါ့ကိုများ ပေစောင်းစောင်းနဲ့ ကြည့်နေသေးတယ်။။
ငါ့လို ကမ္ဘာကြီးကို မျက်လုံးတစ်ဖက်ထဲနဲ့ မကြည့်ပါနဲ့ကွာ.. နှစ်ဖက်စလုံးဖွင့်ပြီးကြည့်ပါ။
ငါ့အနားမှာရှိလို့ကတော့ ဟောသလို သွားတွေပါ ကျွတ်ထွက်သွားအာင် လက်သီးစာကျွေးပစ်မယ်ကွ..
ဒီတစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါလား.. ငါ့လက်သီးစာမိသွားလို့ မျက်လုံးတောင် ကျွတ်ထွက်သွားပြီ..
စိတ်ထားမကောင်းတဲ့သူက ဒီလိုဘဲ ရုပ်ဆိုးတယ်..
ငါသေရင်တောင် အလွတ်မပေးဘူး .. မင်းကိုလာခြောက်မယ်
တကယ်တမ်းတော့ မင်းဟာ အစွယ်ပြူးပြူးနဲ့ပါလားကွာ
ကျွန်တော့နာမည်ကိုညစ်ကျယ်ပါ။။ ဟိုဘက်အိမ်ကလူတွေဆီ ဘာတွေများ အချောင်ရမလဲလို့ ချောင်းနေတာ.. :)
သူတို့ဆီကနေ ရသမျှ အကုန်ယူဖို့ ပါးစပ်ကျယ်ကျယ် ဟထားပါတယ်။။
ခုတစ်လော အိုဘားမားတစ်ယောက် အိမ်ဘေးက လူတွေကို ပြုံးပြုံးပြနေတယ်.
ဒီလိုဆို ငါ့အတွက် အခြေအနေသိပ်မကောင်းဘူး။ အိမ်ဘေးဆီက ငါလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေ မရတော့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ..
ငါဘာလုပ်ရမလဲ.. သူတို့အခြေအနေကို အသာလေးစာင့်ကြည့်ရမယ်...
သိပြီ... ဟိုလူကြီးကို ကပ်ပြီးပေါင်းထားရမယ်.. :P
ဘယ်ရမလဲ.. ငါတို့ဆီကထွက်တဲ့ ဈေးပေါပေါ ခပ်ညံ့ညံ့ပစ္စည်းတွေယူသွားပီး လာဘ်ထိုးရမယ်..
နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ ပြောမရရင် မျက်ရည်ကျပြလိုက်ရုံရှိတာပေါ့လေ.. ဟွန်း..
~~~~~~~~~~~~~~~ The End ~~~~~~~~~~~~~~~
Nothing special, just for fun. :)
ဝက်သားပူစီနံ ချဉ်စပ်သုပ်၊ ဝက်သားသစ်အယ်သီးကြော်
Posted by ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) at Saturday, November 12, 2011 Saturday, November 12, 2011 Labels: စားသောက်ဖွယ်ရာ
ချစ်သော မိတ်ဆွေများကို ဒီတစ်ပတ် ဟင်းချက်စရာကဏ္ဍမှာ ခု ဆောင်းရာသီမှာ လှိုင်လှိုင်ပေါနေပြီဖြစ်တဲ့ သစ်အယ်သီး ( Sweet Chestnuts) ကို ဝက်သားနဲ့ ကြော်တဲ့နည်းရယ်၊ ပူစီနံရွက်ကို ဝက်သားနဲ့ ချဉ်စပ်လေး သုပ်တဲ့နည်းရယ် ကိုပြောပြချင်ပါတယ်ရှင်။ သစ်အယ်သီးကို ကျွန်မတို့ ကချင်ပြည်နယ် မှာတော့ ဂုံးသီးလို့လည်း ခေါ်ကြပြီး အချို့ကနှစ်တစ်ထောင်သီး လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ အခု ကျွန်မနေတဲ့မြို့မှာလည်း သစ်အယ်သီးတွေ သိပ်ပေါနေပါပြီ။ ဒါကြောင့် သစ်အယ်သီး ရှိတဲ့ ဒေသမှာ ရောက်နေသူများအတွက် ဟင်းတစ်ခွက် ရနိုင်အောင် ချက်နည်းလေး ပြန်လည် မျှဝေချင် ပါတယ်နော်။
သစ်အယ်သီး အစိမ်း အလုံး၂၀ခန့် အခွံမာများ ခွာလိုက်ပါတယ်.
၄င်း အတွင်းသားများကို ရေနွေးဖြင့် မိနစ် ၂၀ခန့် ပြုတ်ပါတယ်..
ဝက်သားများကို အတုံးငယ်လေးများတုံးပြီး ဆား၊ ငံပြာရည်အကြည်၊ အရသာမှုန့်တို့ဖြင့် နယ်ထားလိုက်ပါတယ်..
ဂုံးသီးများကျက်သွားပြီဆိုရင် ခုလို ခပ်ရွယ်ရွယ် အပိုင်းကလေးတွေ ပိုင်းလိုက်ပါတယ်။
ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း တို့ဖြင့် ဝက်သားကို ကြော်ပါမယ်..
ဝက်သားကျက်ခါနီးမှာ သစ်အယ်သီး၊ ဂျူးဖူး အနည်းငယ်၊ ငရုပ်သီးတို့ကို ထည့်ပါတယ်.. ဂျူးဖူးက အစိမ်းရောင်လေး လိုချင်လို့ ထည့်တာပါ. မရှိလည်း မထည့်ဘဲ ရပါတယ်.. ကြက်သွန်မြိတ်၊ နံနံတို့ကို ချကာနီးမှ ထည့်နိုင်ပါတယ်။။
အရသာမှုန့်များထည့်ပြီး အပေါ့ငံမြည်းလို့ အနေတော်ရင် ချလို့ရပါပြီ..
ဒီအသုပ်ကတော့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အလည်လာတုန်းက ချက်ကျွေးဖြစ်တဲ့ ဟင်းဖြစ်ပါတယ်.. ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်လေးမို့ အတော်လေး ခံတွင်းမြိန်ပြီးတော့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူက ကောင်းလိုက်တာလို့ တဖွဖွ ပြောပြီး နောက်တစ်ကြိမ် သူအလည်လာချိန်မှာလည်း ပူစီနံရွက် သုပ်ကျွေးပါဦးလို့ တောင်းဆိုတဲ့ ဟင်းတစ်ခွက် ဖြစ်ပါတယ်.. သူပြောသလို ကောင်းမကောင်းဆိုတာတော့ စာဖတ်သူများ ကိုယ်တိုင် ချက်စား ကြည့်ရင် သိမှာပါနော်..မယုံရင် စားကြည့်ပါ။ :P
ဝက်သားနဲ့ သုပ်စားဖို့အတွက် ပူစီနံရွက်ကို ရေစင်အောင် ဆေးပြီး ရေစစ်ထားလိုက်ပါတယ်..
ဒါကတော့ တောက်တောက်စင်းထားတဲ့ ဝက်သားတွေပါ။။
ဝက်သားတွေကို ဆား၊ အရသာမှုန့်ထည့်ပြီး အိုးထဲကို ရေနည်းနည်းထည့်ပြီး မီးပေါ်တည်ပါတယ်။။ ရေခမ်းသွားချိန်မှာ ဆီနည်းနည်းသာထည့်ပြီး ကြော်ပါတယ်.. ဝက်သားကျက်ရင် အေးအောင် ခနထားလိုက်ပါတယ်.
ပူစီနံရွက်တွေကို မိမိနှစ်သက်ရာ အရွယ်လှီးဖြတ်ပြီး ကြက်သွန်နီ၊ ငရုပ်သီးစိမ်း၊ ခရမ်းချဉ်သီး တို့ထည့်ပါတယ်.. ထို့နောက် သရုပ်သီးအစိမ်းမှုန့်ကို ဆီနဲ့ကြော်ပြီး ၄င်းဆီနဲ့ ငရုပ်သီးကြော်တို့ကို ထည့်ပါတယ်။
ကြော်ပြီး အေးအောင် ထားထားတဲ့ ဝက်သားများကို ထည့်လိုက်ပါတယ်၊။ ဝက်သားကို ကြော်ပြီးချင်းချင်း မထည့်ပါဘူး.. ပူနေတုန်း ထည့်ပါက ဝက်သားကြော်ရဲ့ အပူချိန်ကြေင့် ပူစီနံရွက်များ နွမ်းသွားတတ်ပါတယ်။
သံပုရာသီးပါ အဆင်သင့်ပြင်ထားပြီး စားခါနီးမှ ကောက်နယ်လိုက်ရုံပါဘဲ
သံပုရာသီးညှစ်ပြီး နယ်ပါပြီ.. ဆား၊ အရသာမှုန့် ၊ ငါးငံပြာရည် စသည်တို့ကိုထည့်ပါတယ်
သံပုရာနံ့မွှေးမွှေး ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ပူရှိန်းရှိန်းနဲ့ ဝက်သားပူစံနံသုပ်ရပါပြီ.
အဲဒီ သူငယ်ချင်း နောက်တစ်ကြိမ် အိမ်လာလည်တဲ့အခါ သူတောင်းဆိုတာနဲ့ ထပ်ပြီး သုပ်ကျွေးဖြစ်တဲ့ ဝက်သားပူစီနံသုပ်ပါ.
အဆီမများဘဲ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ်၊ ပူပူရှိန်းရှိန်း ကြိုက်တတ်သူများအတွက် ခံတွင်းတွေ့မဲ့ ဝက်သားပူစီနံသုပ်ဟင်း ဖြစ်ပါတယ်ရှင်.
ဝက်သားမစားသူများ အပေါ်က အသားနေရာတွေမှာ ကြက်သားနဲ့ အစားထိုးပြီးလည်း ချက်ပြုတ်နိုင် ပါတယ်နော်..
ချစ်သော မိတ်ဆွေများအားလုံးအတွက် Happy Weekend ဖြစ်ပါစေနော်..